Mareykanka oo Dhaqaalo aad u badan ku bixisa Ilaalinta Mid kamid ah Dowladaha Carabta - iftineducation.com
Mareykanka oo Dhaqaalo aad u badan ku bixisa Ilaalinta Mid kamid ah Dowladaha Carabta
aadan21 / April 28, 2017
iftineducation.com – Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in dhaqaalo aad u badan dowlada Mareykanka uga baxdo ilaalinta dowlada Sacuudi Carabiya , oo kamid ah dowladaha xariirka wanaagsan kala dhaxeeyo.
Donald Trump ayaa sheegay in heshiis dowlada Mareykanka horey ula gashay Boqortooyada Sacuudiga uu yahay mid hal dhinac u janjeera oo dan badan ay ugu jirto dowlada Sacuudiga sida uu tilmaamay.
Wareysi uu Madaxweynaha Mareykanka siiyay Wakaalada Wararka Reuters ayuu ku sheegay in dhaqaale aad u badan uga baxdo dowlada Mareykanka ilaalinta Sacuudiga, waxa uuna tilmaamay in dowladiisa Sacuudiga ula dhaqmeyso si aan dhax dhaxaad aheyn.
Xariirka u dhaxeeya dowladaha Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa la sheegay in uu soo hagaagayay tan iyo markii ay wadahadal yeesheen ku xigeenka dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman iyo Madaxweyne Donald Trump.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sidoo kale la sheegay in uu ka baaran dagayo suurto galnimada in uu booqasho ku tago Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo dhulka ay xooga ku heesato Israa’il.
Daawo Muuqaal : Raisul Wasaarayaasha ugu caansan Yurub oo ilaaladooda ka dhuuntay iyo Yaabka dhacay !!
War Deg Deg Ah: Qarax xoogan oo goordhaw ka dhacay magaalada Muqdisho